21 Yei Akanakisa Makotesheni Kubva kuKanon Kwauchabatana Nayo - Zvimwe
21 Of The Best Quotes Kubva Kanon Kuti Uchabatanidza With
Kanon anime mavara mune ino quote post:
Zvakafanana naClannad, Kanon ndeye anime izvo zvinoziva kuita zverudo uye kugadzira mamiriro pamwe nevatambi.
Kana iwe uchida chimwe chinhu kurangarira iyo anime na, kana iwe uri kufarira kuyedza, heino akanakisa Kanon makotesheni kukwidza kufarira kwako.
Kanon Anime Quotes:
Sayuri Kurata Quotes
“Rwiyo irworwo rwunozvidzokorora rwiyo parunowedzera kupfuma nekunaka. Hazvingave zvakanaka here kana tikararama hupenyu hwakaita senge tichigara tichichinja zvishoma nezvishoma? ' - Sayuri Kurata
Yuichi Aizawa Quotes
'Munyika ino, pane zvinhu zvauri nani kuti usazive.' - Yuichi Aizawa
“Kana pakupera kwekurota, paive nechimwe chinhu chaizoita kuti ndinzwe kushinga zvakakwana kuti ndidzokere pachokwadi, unenge uri mavambo matsva kumusikana mudiki asina mhaka… kuziva zvekuomerwa, uye kuchema achinzwira tsitsi kana kuziva mufaro uye kuseka zvichibva pamoyo… Kufambira mberi, kuona izvi zvezuva nezuva zvinhu kekutanga. Zvinoita sekunge ndinenge ndiri padyo nemusikana mudiki parwendo rwake. Na Sayuri-san, tinozozvipinza mune zvese zvakaipa zvinhu… uye hunhu husingakanganwe hwenyaya yakadaro ndi… Iye. ” - Yuichi Aizawa
“Zviroto zvese zvine magumo… Hazvinei hazvo kuti kurota kwacho kungave kwakanaka sei, kana kunotyisa sei. Pasi pegumbeze rako rinodziya, kurota kwacho kunouya nekukurumidza, apo amai vanokuzunza iwe kuti umuke. Nokusingaperi narini, chiitiko chemangwanani chinoramba chakangofanana. Asi zvino nda… ndinoshamisika… kuti hope dzakatanga rini kupera. ” - Yuichi Aizawa
'Ndiri munhu anonzwisa tsitsi ... hapana chandingaite kunze kwekunge ndiine mumwe munhu wekushandisa semubato.' - Shiori Misaka
“Ndinoziva kuti handifanire kuda chero munhu. Ini hangu handigoni kuvhura moyo wangu kunaani zvake. Nekuti… ndinoziva… ndinoziva kuti zvichavarwadzisa pakupedzisira. ” - Shiori Misaka
“Zvingave zvakakwana kuti zvinhu zvinoshungurudza muhupenyu zvivepo chete muchokwadi. Imhaka yekuti ini ndinofunga kuberekwa kwenyaya kuri kubva kuvanhu vanenge vachirota kuguma kunofadza. ” - Shiori Misaka
'Vanoti mushonga wakanaka kwazvo wechikosoro kutapurira mumwe munhu.' - Shiori Misaka
'Inonzi chishamiso nekuti hazviitike.' - Shiori Misaka
“Kana iwe wave pakati nepakati penyaya, iwe unoda kukwanisa kutarisira kumagumo anofadza, handiti? Iwe haudi kuti ive inosuruvarisa, hupenyu hwakaomarara zvakakwana pasina izvozvo. Ndinotenda ndipo pakabva ngano… vanhu vachirota nezvenyika ine zvinhu zvinopera nemufaro. ' - Shiori Misaka
“Yuuichi… nguva haina chekuita nekukosha kwendangariro. 'Ndezvekukosha kwenguva iyo… Yaive yakakosha zvakadii kumunhu akazviona.' - Shiori Misaka
Ayu Tsukimiya Quotes
'Pakadaro, chishuwo changu chekutanga… Ndapota usakanganwa nezvangu. Kunyangwe 'Ndakasangana nemusikana asinganzwisisike muchando' ... Kunyange izvo zvingave zvakanaka, chero bedzi uchindirangarira. ' - Ayu Tsukimiya
“Hameno kuti sei kuparadzana kwakasuruvara kudai. 'Zvinofanirwa nekuti izvo zvandaigara ndichitora sezvazviri hazvichapiwi.' - Ayu Tsukimiya
“Wakura, asi uchiri kungofanana naYuichi wekare. Zvakangofanana naYuichi wandakafarira. ” - Ayu Tsukimiya
'Izvozvi, chikonzero chega chandinogona kuramba ndichinyemwerera ndechekuda kwako.' - Ayu Tsukimiya
Mai Kawasumi Quotes
'Ndinoda kuti tive pamwe chete… handinei newe. Saka ndinoda kuti tive pamwe chete. Iwe neni naSayuri. ” - Mai Kawasumi
'Ndakanga ndisingadi kuparadzaniswa newe naSayuri nekukurumidza zvakare.' - Mai Kawasumi
Nayuki Minase Makotesheni
'Ibva pano. Ndapota, Yuichi. Handidi kuona chero munhu. Ndinoda… kuva ndoga. ” - Nayuki Minase
'Uchiri kuyeuka zita rangu here?' - Nayuki Minase
Makoto Sawatari Quotes
“Mhuka dzose dzinoraswa kana dzisingachadiwi. Haufunge kudaro? ' - Makoto Sawatari
Akiko Minase Quotes
'Ini handigone kutsiva amai vako, asi ndinofunga ndinogona kunge ndiri semhuri.' - Akiko Minase
Yakaratidzwa mufananidzo sosi: Ayu & Nayuki Wallpaper
Yakurudzirwa: 40 Anime Quotes Kubva Clannad Iwe Unonzwisisa Kana Iwe Wakatarisa Iyo Anime
Anime anoratidza kutarisa muchirungu anonzi
iyo yakanakisa anime inoratidza yenguva dzese